Nezvedu - China Kuvaka Mashini Kunze & Export Co, Ltd.
China Kuvaka Machina Kuisa & Export Co, Ltd. ndeimwe yeChina inotungamira vatengesi vengarava michina, iri muXuzhou City. Kubvira pakagadzwa kambani muna 2011, tanga tichitarisa pachiteshi michini musika. Muna 2012, isu pamwe XCMG kuti vabudirire kuva ccmie muchiso divi loader Crane. Mushure mekuenderera kwekuedza kweinjiniya uye kuenderera kwesainzi hunyanzvi, ichi chigadzirwa chiri kuramba chichirumbidzwa nevatengi vanobva pasirese pasirese, uye chikamu chayo chemusika muChina chakaiswawo pekutanga.
Panguva imwecheteyo, isu tiri zvakare vanobvumirwa mumiriri wekusvitsa stacker uye mudziyo wekubata weZPMC, yepasirese michina michina uye michina inogadzira.
Hatisi chete regai vatengi dzakawanda kunzwisisa uye kuziva zvigadzirwa zvedu, asi zvishoma nezvishoma akasimbisa ushamwari pamwe chiteshi michini vatengi rose.
Nemakore mazhinji ehupfumi ruzivo, isu takawana runodiwa ruzivo rwehunyanzvi uye ruzivo rwakanyanya mumunda wechiteshi michina. Mushure memakore ekushanda nesimba, nhasi isu tichakamira pakati pevazhinji vanokwikwidza kutenderera pasirese. Yakanyatso rongedzwa, inoshanda nehunyanzvi sisitimu yekushandisa uye timu yekutengesa yepasi rese inoita kuti tikwanise kushandura maodha muzvigadzirwa zvekupedzisira nekuzvitumira kune dzinosvika makumi matanhatu nyika nenzvimbo dzakatenderedza pasirese.
Shanghai Zhenhua Heavy Viwanda (Boka) Co, Ltd. (ZPMC) ibhizinesi rinozivikanwa mune iri rinorema michina yekugadzira indasitiri. Iyo yehurumende-inobata A uye B-share yakanyorwa kambani. Bato rinodzora iChina Communications Construction Co., Ltd., imwe yemakambani epamusoro mazana mashanu epasirese. Yakamutangira kambani iyi yaive Gongmao Shipyard, iyo yakavambwa muna 1885. Mushure memakore anodarika zana ekuvandudza, yakazopihwa zita repamutemo zita rekuti Zhenhua Heavy Viwanda muna 2009. Kambani iyi inotungamirwa neShanghai, uye ine zvigadziko gumi zvekugadzira muShanghai, Nantong nedzimwe. nzvimbo, inovhara nzvimbo yakazara ye10,000 mu, iine mahombekombe egumi emakiromita gumi, ayo akadzika emhenderekedzo yegungwa ari makiromita mashanu uye doko rinotakura mutoro 3..7 makiromita. Ndiyo nyika uye yepasirose inogadzira michina inorema yemuchina wechiteshi. Iyo kambani ine 25 60,000 kusvika 100,000 matani-kirasi akazara ekufambisa ngarava, ayo anogona kutakura zvigadzirwa zvakakura pamhiri kwemakungwa nemakungwa kuenda pasirese.
Shanghai Port Machinery Heavy Indasitiri yanga ichigadzira inosvika masiteki kubvira 2010
Rutivi rwakarembera kunze kwenyika kuOceania Iwo eko crane zvigadzirwa zvakagadzirwa nekambani zvakabudirira kutumirwa kunzvimbo yemushandisi nzvimbo muPapua New Guinea muOceania. Iyo kambani yakatanga munaGunyana 2013 pahwaro hwekudzika-kugaya uye kunwa kweiyo tekinoroji yepamberi yekusimudza kumusoro kumba nekune dzimwe nyika. Rori iri mudziyo padivi-kurodha uye kutakura semi-tirera, iyo inoumbwa ne371HP semi-tirera uye MQH37A mudziyo padivi kurodha uye kutura crane. Inokodzera kurodha uye kudzikisa michina yekusimudza yemidziyo makumi maviri nemakumi mana-tsoka.
Musi waNovember 20, 2015, iyo 2015 China Machinery Indasitiri Sayenzi uye Tekinoroji Mubairo Mhemberero yakaitirwa muNanning. Iyo MQH37A yekumusoro crane yakahwina mubairo wechitatu weChina Machinery Industry Science uye Technology Award. Yekutanga epamba mota chassis-yakaiswa padivi crane yakabudirira kubviswa kubva pamutsetse wekugadzira muna 2015. 38 mvumo mvumo, kusanganisira 9 mvumo yekugadzira patent, 28 utility mamodheru, uye 1 chitarisiko dhizaini. Iyo "Container Transporter Yekusimudza Mudziyo neContainer Transporter" chirongwa chakakunda mubairo wegoridhe wekuumba patents, ichiratidza yakasimba musimboti yehunyanzvi simba uye kukwikwidza.
Shanghai Zhenhua Heavy Viwanda Boka rakamisa iyo Yekufambisa Mashini Chikamu muna 2016, uye zvigadzirwa zvakagadziriswa nazvo zvakave zvichizivikanwa pasi rese.
Zhenhua Heavy Indasitiri yakagadza 27 mhiri kwematavi matavi kana mahofisi kutenderera pasirese. Aya ma subsidiary akadzika midzi munzvimbo yemuno, kuita manejimendi manejimendi, kuzadzisa mabasa ehukama, kuita mushure-kutengesa mabasa ekuchengetedza, uye kusimudzira kwemusika.
Musi waJune 15, 2017, Zhenhua Heavy Industry Port Machinery Group neMediterranean Company yakasaina kondirakiti yekuwaniswa kwekusvikira, zvichiratidza kutanga kwekunze kwemakungwa kweZhenhua Heavy Industries 'inosvika zvigadzirwa zvestacker. Mutyairi weMediterranean Company ndiTurkey Potunus Company, ine hupfumi hwakawanda hwekubhadhara uye kutengesa kuita uye chiitiko chekuchengetedza mumunda wediki michina michina michina senge inosvika stackers. Pakutanga nhanho, kambani yakatumira timu yehunyanzvi kuti iongorore Shanghai Port Machinery Heavy Viwanda yekugadzira chigadziko uye zvigadzirwa zveZhenhua Heavy Viwanda muNanhui, uye nekukurukura naZhenhua Heavy Indasitiri mahunyanzvi mune zvakadzama. Kuongorora kwakanaka kwakapihwa Zhenhua Heavy Viwanda inosvika stacker. Panguva iyoyo, iyi inosvika stacker ichabhadharwa nekambani kumatokisi uye ekuchengetedza mayadhi muTurkey nenzvimbo dzakatenderedza.
Musi waChikumi 20, 2017, Zhenhua Heavy Indasitiri neRussia Novorossiysk NUTEP Kambani yakasaina 3 quay cranes, 4 matairi cranes, uye 2 ZPMC dzichangobva kugadzirwa kusvika masiteki.
Kugadzirwa kweZhenhua Heavy Indasitiri Reachstacker uye kutengesa zvakapetwa kanopfuura zana pane Nyamavhuvhu 16, iyo "Ndinokutendai nekuve nemi, fambai mumugwagwa" Zhenhua Heavy Industries zvikamu zana zvekusvitsa stacker kugadzirwa uye musangano wekutengesa wakaitirwa zvakaitirwa. Vatengi, vatengesi, uye vagoveri kubva kumativi ese epasi vakaungana muShanghai Port Machinery Heavy Industry. Zhenhua Heavy Viwanda Mutungamiri uye Mutevedzeri Wemubati wePato Dare Huang Qingfeng, uye Mutevedzeri weMutungamiri Zhang Jian vakapinda musangano wekugadzira nekutengesa. Sezvo chigadzirwa chekutanga chakaburitswa pamutsetse wegungano muna Nyamavhuvhu 2017, Zhenhua Heavy Viwanda inosvika stacker yakawana pamusoro pe100 kugadzirwa nekutengesa, ichivhura zvinobudirira musika wekushambadzira wepamba uye wepasi rose, uye yakahwina rumbidzo kubva kuvashandisi. Kuyerera kwemuchina zvigadzirwa zvinotengeswa kune anopfuura makumi matanhatu maiyadhi emayadhi munyika zvisere uye vane mukurumbira wakanaka mumusika. Pamusangano, ZPMC yakaunzawo hunhu hwekambani yekusvikira stacker uye stacker, uye yakaita yekuchinjana kwehunyanzvi pane iyo nyowani ZPMC inosvika stacker uye stacker. Vatori vechikamu vakashanyirawo nzvimbo yegungano nekumisikidza nzvimbo yeShanghai Port Machinery yekuyerera kwemuchina zvigadzirwa, uye vakaona kushanda kwepamusoro kwekambani kuyerera michina michina ipapo. Mumusika wekusvitsa, Zhenhua Heavy Indasitiri iri rookie muindasitiri uye ichaenderera ichipa vatengi mabasa ari nani uye anokurumidza uye nezvimwe zvakavimbika uye zvigadzirwa zvemberi.
Yekutanga yakagadziriswa padivi crane muChina yakaendeswa kune mushandisi Munguva pfupi yapfuura, yekutanga yekumba yakagadziriswa padivi crane MQH37AYT yakazvimiririra yakagadzirwa nekambani yakaburitswa yakaendeswa kune vashandisi. Iyo yakachinja yakajairwa mudziyo wekusimudza chinhu kune yemutyairi mota yekugadzira michina yekushandisa, uye ndokutora yekumusoro nekudzika mbiri cheni tekinoroji, hwaro-maviri nzira gwara mamiriro, uye inotsvedza humburumbira. Iyo nyowani mamiriro uye tekinoroji nyowani, senge yakafanana dhizaini dhizaini, iko kuita kupindirana kweiyo boom uye wekunze, vakunda kurumbidzwa kwakakwirira uye kuzivikanwa kwavo kuita kwakanaka mukuyedza kuita kwechigadzirwa.
Matatu ekusvikira masitaki akaendeswa zvinobudirira ku Weihai Port yeShandong Port Boka Musi waApril 9th, matatu anosvika masitaki akagadzirwa neShanghai Port Machinery Heavy Industry Co, Ltd. iri pasi peZhenhua Heavy Indasitiri akaendeswa zvinobudirira ku Weihai Port yeShandong Port Group. Nezve batch yekusvikira masiteki, Zhenhua Heavy Indasitiri yakagadziridza dhizaini yemota-akaisirwa ma terminals, 360 panoramic mifananidzo uye mamwe akafanana maratidziro. Munguva yakakosha nguva, Zhenhua Heavy Maindasitiri, ichiri kuita basa rakanaka mukudzivirira denda, yakakurumidza kuronga vashandi kuti vatangezve basa uye kutangazve kugadzira, uye vakaita basa rakanaka mukugadzira nemidziyo yekugadzirisa, uye pakupedzisira vakabudirira kutumira. Se "mudiwa akanaka" wezvekugadziriswa uye kutapurirana senge chiteshi, njanji, uye huwandu hweyadhi yemayadhi, Zhenhua Heavy Indasitiri inosvika masiteki akachengeteka, akangwara, akasununguka, anoponesa simba, uye akavimbika kwazvo, anodzivirira zvakanyanya, ari nyore kushanda, nyore kuchengetedza, nezvimwewo Zvimiro
ZPMC inoyerera michina michina inopinda mumusika weCambodian kekutanga Musi waChikunguru 21, 2020, 4 isina chinhu-mudziyo unosvika masiteki akatumirwa mushe muSihanoukville, Cambodia, zvichiratidza kekutanga nguva iyo Zhenhua Heavy Maindasitiri kuyerera michina michina yakapinda mumusika weCambodian. Sihanoukville Port, inonzi West Port, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwemahombekombe eCambodia. Ndiyo chiteshi chengarava chikuru cheCambodia uye chete chiteshi chemazuva ano chengarava, chiteshi chevasina basa uye gedhi revatengesi vekunze. Zhenhua Heavy Indasitiri yemudziyo inosvika masitaki uye ma stackers ane zvakakosha zvakakosha senge yakakwira kushanda kushanda, kuchengetedzeka uye kuvimbika, uye kusimba kufamba. Vakakunda kuvimba kwevatengi vekunze nekune dzimwe nyika nehurongwa hwavo hwakasimba uye hwakasimba hwekushambadzira webhusaiti.
Cambodia Sihanoukville chiteshi inosvika pachiteshi nekusvika Munguva pfupi yapfuura, 4 isina chinhu mudziyo unosvika masiteki akavakwa neZhenhua Heavy Indasitiri yeSihanoukville Port muCambodia yakasvika pachiteshi zvakanaka. Sihanoukville Port, inonzi West Port, iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwemahombekombe eCambodia. Ndiyo chiteshi chengarava chikuru cheCambodia uye chete chiteshi chemazuva ano chengarava, chiteshi chevasina basa uye gedhi revatengesi vekunze. Zhenhua Heavy Indasitiri yemudziyo inosvika masitaki uye masitaki ane zvakakosha zvakakosha senge yakanyanya kushanda, kuchengetedzeka uye kuvimbika, uye kusimba maneuverability. Sezvo chigadzirwa chekutanga chakaburitswa pamutsetse muna Nyamavhuvhu 2017, kambani yatengesa angangoita mazana maviri ekusvika emastackers, ayo anotengeswa kure kure. Dzakawanda dzenyika dzakadai seSingapore neCambodia.
ZPMC Super Reachstacker akateedzana zvigadzirwa zvakakungurutswa kubva pagungano mutsara imwe mushure meimwe Munguva pfupi yapfuura, iyo ZPMC Super Reachstacker akateedzana zvigadzirwa zvabviswa pamutsetse wegungano imwe mushure meimwe, kupinza simba idzva mumusika wekushambadzira wemuchina. Iyo yepamusoro inosvika stacker inogona kusangana neepamusoro-kugona kudhiza zvido zveakasiyana ma terminals nemayadhi, uye yakangwara uye yakachengeteka. Muchina wese unotora kureruka-kurema dhizaini, huremu hwemuchina wese idiki masere masere pane akajairwa modhi muindasitiri, iyo inogona kudzikisira zvakanyanya kudyiwa kwemafuta emidziyo, kudzikisa kumanikidza vhiri pasi, uye kuwedzera sevhisi hupenyu hwesaiti; iyo indasitiri yekutanga otomatiki shanduko Iyo wheelbase dhizaini inogonesa yakanyanya kusiana wheelbase yeiyo super kusvika stacker kusvika 2.5 mita, iyo inogona kuita mashandiro pasi pemamiriro akasiyana ekushanda, ichideredza zvakanyanya huremu uye kutenderera nharaunda yemidziyo; yakagadzirirwa nechizvarwa chechitatu electro-hydraulic control system yeZhenhua kuti ione kushanda kweye spreader, Iwo matatu mabasa ekubatanidza e boom telescoping uye boom tilting inovandudza zvakanyanya kugona kwebasa uye kunyatsoita kweanosvika stacker; Yakashongedzerwa neyakaumbirwa humburumbira inogona kuita "simba kupora", chengetedza simba rekushandisa, uye kudzora zvakakwana mashandisiro emari. Uye zvakare, iyo yepamusoro inosvika stacker inoshanduka uye ine yakanakisa kutyaira ruzivo. Kunyangwe mumamiriro ekunze akashata, inogona nyore uye nehungwaru kuona zvipingamupinyi uye nekumisikidza bhureki painodzora. Iyo humanized cab dhizaini inoita kuti mamiriro ekutyaira awedzere kugadzikana. , Chengetedzo. Mune ramangwana, iyo yepamusoro inosvika stacker ichave zvakare yakagadzirirwa nemidziyo IoT gore chikuva, iyo inogona kuita iri kure mota mamiriro ekuongorora, simba rekugadzirisa ongororo, uye mushure-kutengesa kugadziridza kupa vatengi zviine ruzivo rwakadzama uye mune-nzvimbo masevhisi uye kugadzirisa michina kunyatsoshanda. Mumakore achangopfuura, kambani yakagadzira uye ikatengesa angangoita mazana maviri ekusvika ekumisikidza uye anopfuura makumi mana masiteki. Iyo yakabudirira kupinda muShanghai, Singapore, Qingdao, Guangzhou uye mamwe madoko makuru uye kutumirwa kune dzimwe nyika. Nekuwedzera kweanosvika makuru masitaki, Zhenhua kuyerera michina zvigadzirwa Ichashandira vamwe vashandisi.